Kooxda Fraport: Dakhliga iyo faa'iidada saafiga ah ayaa si weyn kor ugu kacay sagaal bilood ee 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Kooxda Fraport: Dakhliga iyo faa'iidada saafiga ah ayaa si weyn kor ugu kacay sagaal bilood ee 2021
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Kooxda Fraport: Dakhliga iyo faa'iidada saafiga ah ayaa si weyn kor ugu kacay sagaal bilood ee 2021.
Waxaa lagu xoojiyay soo kabashada muuqata ee safarka fasaxa inta lagu jiro xilliga xagaaga, dakhligu wuxuu kor u kacay rubuci saddexaad ee 2021 79.5 boqolkiiba ilaa € 633.8 milyan marka la barbar dhigo € 353.1 milyan isla rubucii 2020.
Soo kabashada taraafikada rakaabka diyaaradda waxay horseedaysaa kobac dakhli oo xooggan 9-ka bilood ee ugu horreeya 2021.
Dalabka safarka fasaxa ee bilaha xagaaga ayaa ahaa mid xoog badan.
Natiijadu way hagaagtay sababtoo ah magdhowga maaliyadeed ee la helay khasaaraha la xidhiidha masiibada ee ka dhacay garoommada kooxda ee kala duwan.
Shirkadda diyaaradaha caalamiga ah ee Fraport waxay gaartay koror weyn oo dakhliga iyo natiijada kooxda (faa'iidada saafiga ah) labadaba rubuci saddexaad iyo sagaalkii bilood ee ugu horreeyay (dhamaatay Sebtembar 30) ee sannad-shaqeedka 2021. Waxyaalaha ka qayb qaadanaya kororkan waxaa ka mid ah waxqabad hawleed togan iyo dhowr saameyn oo hal mar ah. Saadaasha xilliga jiilaalka ee soo socda ayaa sidoo kale rajo wanaagsan leh. Sidaa darteed, Fraport waxay dib u eegtay dakhligeeda sanadka oo dhan ee dakhliga iyo tirooyinka kale ee maaliyadeed ee muhiimka ah waxoogaa kor u kaca. Horumarka taraafikada ee garoonka Frankfurt ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro aagga sare ee baaxadda waxqabadka la filayo, inta u dhaxaysa 20 milyan ilaa 25 milyan oo rakaab ah.
Fraport Maamulaha guud, Dr. Stefan Schulte, ayaa sharraxay: "Ka dib khasaarihii baaxadda lahaa ee la kulmay 2020 iyo kororka deynta ee ka dhashay, waxaan hadda aragnaa rajooyin ifaya oo soo socda. Dalabka safarka fasaxa ee bilaha xagaaga ayaa ahaa mid xoog badan. Waxaa intaa dheer, natiijadeenu way hagaagtay sababtoo ah magdhowga maaliyadeed ee laga helay khasaaraha la xidhiidha masiibada ee garoommada kooxda ee kala duwan. Hadda, waxaan sidoo kale filaynaa in isu socodka qaaradaha isaga gudba uu si tartiib tartiib ah u soo kabsado - oo ay taageerayso dib u furista dhowaan ee xuduudaha Mareykanka. Sidaa darteed, waxaan xoogaa rajo ka qabnaa xilliga jiilaalka marka loo eego dhowr bilood ka hor. Si kastaba ha ahaatee, weli way fog tahay ilaa aan gaarno heerarkii rakaabka ka hor masiibada oo aan awoodno inaan si weyn u dhimno deyntayada."
Rubuca saddexaad: dakhliga iyo faa'iidada saafiga ah ayaa si xoog leh u koraya
Waxaa lagu xoojiyay soo kabashada muuqata ee safarka fasaxa inta lagu jiro xilliga xagaaga, dakhligu wuxuu kor u kacay rubuci saddexaad ee 2021 79.5 boqolkiiba ilaa € 633.8 milyan marka la barbar dhigo € 353.1 milyan isla rubucii 2020 (labada qiime waxaa lagu hagaajiyay IFRIC 12 qandaraas la xiriira dakhliga ka soo gala dhismaha iyo tallaabooyinka ballaarinta at Fraportshirkadaha caalamiga ah). EBITDA waxay kor u kacday €288.6 milyan rubuci saddexaad, laga jaray €250.3 milyan Q3/2020. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidadani waxay sidoo kale ka tarjumaysaa tiro saameyn ah oo hal mar ah: rubuci saddexaad ee 2020, dakhliga ayaa si xun u saameeyay abuurista qodobbo loogu talagalay tallaabooyinka dhimista shaqaalaha oo dhan € 279.5 milyan. Sannadkan, dhankeeda, wax ku biirinta togan ee rubuci saddexaad waxay ka timid magdhow la xidhiidha COVID oo la siiyay kaabayaasheena Mareykanka, Slovenia iyo Greece - taas oo kor u qaaday "dakhliga kale" ee kooxda ilaa € 30 milyan. Hagaajinta saamaynta hal-mar ah, Fraport wali waxay dhajisay kobaca EBITDA xooggan ee 785.6 boqolkiiba ilaa €258.6 milyan rubuci saddexaad ee 2021, marka loo eego €29.2 milyan isla muddadaas sannadkii hore. Natiijada kooxda - ama faa'iidada saafiga ah - waxay gaadhay €102.6 milyan Q3/2021 (oo ay ku jiraan saamaynta kor ku xusan), marka la barbar dhigo € 305.8 milyan ee Q3/2020.
Sagaalka bilood ee ugu horreeya 2021: Fraport waxay gaadhay natiijo hawleed adag, oo ay taageerto saamayn togan oo hal mar ah
Inta lagu jiro sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sanadkan, dakhliga kooxdu wuxuu kor u kacay 18.3 boqolkiiba sannad kasta ilaa ku dhawaad ​​€1.4 bilyan (marka laga reebo saamaynta IFRIC 12). Koritaanka rakaabka ee ka baxsan Frankfurt, dakhliga ayaa si togan u saameeyay heshiis la gaadhay rubuci hore ee 2021 ee u dhexeeya Fraport iyo Booliska Federaalka Jarmalka (Bundespolizei) ee gunnada adeegyada amniga duulista ee ay bixiso Fraport hore. Heshiiska ayaa soo xareeyay dakhli dheeri ah oo gaaraya €57.8 milyan. Saamaynta kale ee hal-mar ah ayaa sidoo kale saameyn togan ku leh dhinaca dakhliga: Kuwaas waxaa ka mid ah magdhowga Jarmalka iyo dawladda Hesse ee la siiyay Fraport si ay u ilaaliso diyaargarowga shaqada ee garoonka diyaaradaha ee Frankfurt inta lagu jiro xiritaanka, iyo sidoo kale magdhowga masiibada ah ee kooxda hoos timaada ee Giriiga, ah Maraykanka iyo Slovenia – oo ku biirisay wadar dhan 275.1 milyan Yuuro “Dakhliga Kale” ee Fraport. Marka lagu daro lacagta gunnada ee Booliska Federaalka Jarmalka, saamayntan aan soo noqnoqonaynin waxay ku biirisay wadarta €332.9 milyan dakhliga kale, oo leh saamayn togan oo u dhiganta natiijada hawlgalka (EBITDA).
Nofeembar 10, 2021 at 08: 37
Ganacsigeena Bioenergy & Ganacsiyada kale waxay gaadheen dakhli aad u sarreeya marka loo eego isla muddadaas. Runtii aad baan ugu riyaaqay akhrinteeda qoraalkan oo ku filan inaan raadiyo qorista maqaalkan wanaagsan iyo qoraalkan waxtarka leh mahadsanid wadaagga.